चीन र इटलीको भन्दा फरक खाले ‘अज्ञात कोरोना’ फ्रान्समा - Jhilko
चीन र इटलीको भन्दा फरक खाले ‘अज्ञात कोरोना’ फ्रान्समा
काठमाडौ । फ्रान्समा इटली र चीनको भन्दा फरक खाले ‘अज्ञात कोरोना’ पहिले देखि गुप्ततवरले विस्तारै डुलिरहेको एक नयाँ अध्ययनबाट थाहा भएको छ ।
चीन र इटलीबाट आएको हुन सक्ने कोरोनाभाइरस कोभिड–१९का लागि फ्रान्स सरकारले जेजति गरेको भएपनि त्यहाँ कोरोनाको अज्ञात समूहबाट स्थानीयहरू पहिलेदेखि संक्रति रही आएको सो अध्ययनले जनाएको हो ।
पेरिसमा रहेको पास्टर इन्स्टिच्युटका भाइरसविज्ञ‘भाइरोलोजिस्ट’हरूले क्रमबद्ध जीवोम वा जनोमका नमूना जनवरी २४देखि मार्च २४बीचका ९७ फ्रान्स र ३ अल्जेरियाली कोरोनाभभाइरस बिरामीबाट संकलन गरी सो अध्ययन गरेका हुन् ।
उनीहरूको अध्ययनबाट चीन वा इटलीमा भएको कोभिड–१९को भन्दा फरक खाले भाइरस समूह रहेको देखिएको हो ।
जनवरी २४ देखि मार्च २४ सम्मको अवधिमा सबै भन्दा पुरानो नमूना फेब्रुअरी १९मा एक संक्रमितबाट लिइएको थियो । त्यो व्यक्तिको विदेश भ्रमणको कुनै नयाँ विगत वृतान्त नभएको र रोग बोकी ल्याउन सक्ने कुनै सम्भावित रोगवाहकको सम्पर्क समेत नभएको देखिएको छ ।
भाइरोलोजिस्टहरूको अध्ययन प्रतिवेदनमा यो रोगीको अवस्था अध्ययन गर्दा फेब्रुअरी भन्दा पहिले देखि यो अज्ञात भाइरस फ्रान्समा डुलिरहेको निष्कर्ष निकालेका हुन् । यो अध्ययन बायोआरएकआइभी वेबसाइटमा प्रकाशित गरिएको छ।
यो तेस्रो खाले कोरोनाभाइरसको उत्पत्ति स्थल अझसम्म फेला नपरेको वैज्ञानिकहरूले बताएका छन् । उनीहरूको अध्ययनको सीमाले गर्दा यसको उत्पत्ति फ्रान्समै भएको भन्न नसकिने वैज्ञानिकहरूको भनाइ रहेको छ ।
पहिलो समूहको कोरोनाभाइरस फ्रान्समा फेब्रअरीको मध्यतिर देखा परेको थियो । यसबाट अहिलेसम्म १ लाख २९हजार ८५९ भन्दा बढी संक्रमित भइसकेका छन् भने यो भाइरसको समस्याले मर्नेहरूको संख्या २३ हजार ६६० नाघि सकेको छ ।
विद्यमान पार्टी संघर्षमा वादल लाइन
‘साईकल सिटि’ चितवनमा आजकल किन साइकल देखिंदैन ? कारण यस्तो...
चितवनको मुख्य राजमार्ग क्षेत्रमा छिटफुटरुपमा साइकल चलाएको देख्न पाइन्छ । दश वर्षअघिसम्म...
आगामी बर्षको बजेट आकार घट्यो, १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोडको...
आगामी आर्थिक बर्षको लागि अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले १४ खर्ब ७४ अर्बको ६४ करोड...
हङकङमा रोकिएको पानी जहाजका साढे तीन जहाज याुत्रमा कोरोनाभाइरस...
कोरोनाभाइरसको संक्रमण भएको हुन सक्ने आंशकामा हङकङमा रोकिएको पानी जहाजका ३६०० यात्रु...